चार पटक शिलान्यास, पुलको निर्माण ज्युँका त्युँ - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 Headline2 Main News National Politics चार पटक शिलान्यास, पुलको निर्माण ज्युँका त्युँ
उदयपुर,२९ जेष्ठ । पूर्व सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काले पाँच वर्षअघि शिलान्यास गरेको पुल सम्पन्न हुने बेलासम्म अलपत्र परेको छ । बेलका नगरपालिका–३ स्थित गिदेरी खोलामा निर्माणाधीन पुल ठेकेदार को कारण अलपत्र परेको हो ।
०७१ असार ३० मा शिलान्यास गरिएको पुल ०७४ असार ३० सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणको जिम्म पप्पु÷मृत संजीवनी जेभी बानेश्वर लिएको छ । उक्त कम्पनीले १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा निर्माणको सम्झौता गरेको हो । सरकारले कुल १९ करोड २ लाख २७ हजार २५ रुपैयाँ ३२ पैसामा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त बजेटमा घटाएर पप्पु÷मृत संजीवनी जेभीले निर्माणको सम्झौता गरेको हो । तर, काम सुरु गरेको केही समयपछि कम्पनीले काम छाडेर गएको बेलका नगरपालिका–२ का नवराज गुरागाईले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय लहानका अनुसार २१८ दशमलब ७० मिटर लम्बाई र ७ दशमलब २० मिटर चौडाइ रहने पुलको पिलर मात्र गाडिएको छ । उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले सडक डिभिजन कार्यालय लहानले काम अलपत्र पार्ने उक्त ठेकेदार कम्पनीको नाम नदिएको बताए । ‘गिदेरी खोलाको पुलको गुनासो धेरै पटक आइरहेको छ, उनले भने, ‘पुनः एक पटक लाहान कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गर्छु र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छु ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको नामावली गृह मन्त्रालय पठाइसकिएको छ । तर, कतिपयका नामावली सम्बन्धित कार्यालयले नामावली नदिँदा समस्या भएको प्रजिअ कार्कीको भनाइ छ ।
चार पटक शिलान्यास ! गिदेरी खोलाको पुल अहिलेसम्म चार पटक शिलान्यास भइसकेको छ । पुलको शिलान्यास ०६४, ०६९, ०७० र ०७१ मा पूर्वमन्त्री खड्काले नै उक्त गरेका हुन् ।